Ajjeechaa Yaasoo: Ajjeechaa Yaasootti raawwateefi maatii du’a jalaa ‘bahan’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAjjeechaa Yaasoo: Ajjeechaa Yaasootti raawwateefi maatii du’a jalaa ‘bahan’
Ajjeechaa Yaasoo: Ajjeechaa Yaasootti raawwateefi maatii du’a jalaa ‘bahan‘
Duulli gama Gumuzootaatiin Oromoo irratti baname harka warra bineensaa of keessaa qaba kan jedhamuuf kun ragaa tokko. Warri huccuu waraanaa uffate kun eenyu? Abbaa fedhanis ta’an jara kanatu warra Gumuz hidhachiisee fi bajata itti ramadee Oromoo irratti duulchise, duulchisaas jira. Garuu humni kun ammallee qaama humna Ittisa Biyyaatii? Sun gaaffii dha. Qulqulleessuu feesisa. Warri shiraaf ergame yuniform Humna Ittisa Biyyaa uffatanii hojii kana hojjetaa jiru tahuu danda’a. Kaayyoon isaas Oromoo fi mootummaa wal afaan deebisuuf. Humni Ittisa biyyaas dafee of keessa sakatta’udhan eenyummaa jara kanaa ifa baasuu qaba.
ይህ የምታዩት ፎቶግራፍ የትም እንዳይምስላችሁ ንፁሃን እንደ ቅጠል የምረግፉባት መቶ ሺዎች የተፈናቀሉባት የቤ/ጉዟ ካማሺ ነች። እውነታውን ዱሮውንም እናውቅ ነበር ጉሙዞች ከመሬት ተነስተው ሰው እንደማያጠቁ የጠረጠርነው Driving Force ለካስ መ/ሠ ነው። ፊታቸውን እዩና ኬት አከባቢ እንደሆኑ ግልፅ ነው።
Kora bittinneesaa (poolisii Oromiyaati) kan ajjeefame shiftoota gumuuziini akka namni arge himutti poolisiin kun kan ajjeefame akka beeyladaatti ciibsamee qalame jedhan humni makalaakiyaas ummata gumuuz wajjin jiraachuutu irra deddeebi’amee himamaa jira falli maalif hin barbaadamne gama lixa oromiyaa kanaas
Kun hundi Oromoo jabeessa malee duubatti hin deebisu!!
Mootummaan Naannoo Oromiyaa hatattamaan humna WBO cimsee hidhachiisuu qaba!
Gumaan ummata keenyaa akka dhangala’etti hin hafu!!
(bbc)—Ajjeechaa torban darbe magaalaa Yaasootti raawwateen miseensa maatii isaanii saddeet dhabuu isaanii namni ajjeechaa sana baqataniifi yeroo ammaa gaddarra jiran BBC’tti himan.
Torban darbe gaafa Roobii Sadaasa bultii 11, 2010 galgala gabaasni ajjeechaa Naannoo Benishaangul Gumuz Godina Kaamashi magaalaa Yaasootti raawwatuun isaa dhagahamus qondaalli mirkaneessu dhibee ture.
”Abbaakoo Fayyisaa Diisaasaa, obboleessa isaa Dhiinsaa Disaasaa dabalatee ijoollee isaafi ijoollee abbaakooti dabalatee, kanumti hortee Disaasaa nama saddeetitu karaa namaaf hin taanen ajjeefame,” jedhan Obbo Waggaarii Fayyisaa.
“Ega waan nyaatamu dhabnee guyyaa sagali”
Haati ijoollee saddeetiifi kan abbaan warraa isaanii jalaa ajjeefame, Aadde Likkituu Tafarraa yeroo kuni raawwate mana sana keessa turani. Garuu, miliqani bahuu isaanii dubbatu.
”Qawwee nutti dhukaasanii fixanii cidii nutti naqani abidda nutti qabsiisan. Nuti karaa dudduubaa baqannee baane,” jechuun BBC’tti himaniiru.
Sababa kanaaf, akka maatiin jedhanitti namoonni mana sana keessa ajjjeefaman hundi isaanii kan maatii tokkoofi dhiirotadha.
Erga gidduu kana rakkoon dhalate eegalee maatiin obbolaawwani lakkoofsaan 21 ta’aniifi magaalaa Yaasoo keessa jiraatan ‘waljajjabeessuuf’ jechuun bakka tokkotti waliin jiraachuu eegaluu isaanii maatiin himu.
Keessumaa manni isaanii naannoo buufata Poolisiitti dhihoo ta’un isaa nageenyi akka itti dhagahamu gochuu isaa amananis wanta raawwate kana amanananii fudhachuun isaan rakkiseera.
Ijoolleen warrii isaanii dhukaasaan jalaa yeroo ajjeefaman argan baqatani bahanis wanti argan isaan jeeqaa ammallee ”sammuutti hin deebi’in jiru” jedhu Obbo Waggaariin.
Yeroo ammaa maatiin kuni adeemsa yeroo dheeraa booda qe’ee isaaniirraa baqatanii fira isaanii Aanaa ollaa, Aanaa Haroo Limmuutti gadda taa’aa akka jiran himu.
”Gadda nama saddeeti taa’aa jirra akka maatiitti. Du’uu isaanii mirkaneeffannee du’a gayii taa’aa jirra.”
Waan mudate yeroo jiraattonni dubbatan wanta sukaneessaa hedduu kaasu. Du’uu isaanii qofa osoo hintaane owwaalcha malee akka hafanittis amanu.
Ajjeechaan magaalaa Yaasootti raawwate jedhani jirattonni dubbataniifi gara caalu miidiyaalen biyya keessaa lagatan kuni ajjeechaawwan gara Lixa Oromiyaa ji’oota muraasa darbe dhagahamanirraa adda.
Qondaaltonni Naannoo Benishaangul Gumuuz boodarra ajjeechaan raawwachuu isaa amananis lakkoofsi isaa garuu kan jiraatonni jedhanin waldarba.
Jiraattonni dubbisneefi Bulchaan Aanaa Haroo Limmuu Obbo Gaaromaa Tolasaa gaafa Roobii darbe lammiileen 40’tti siqan magaalaa Yaasoo keessatti ajjeefamuu isaanii mirkaneessineerra jedhu.
”Gara namoota afurtamaatu qalameera, ijoollee dabalatee. Keessattuu ijoollee dhiira taate haadharraa fuudhanii qalaa turan,” jechuun BBC’tti himaniiru.
Hogganaan Biiroo Bulchinsaa fi Nageenyaa Naannoo Benishanagul Gumuuz Musaa Ahmad, caasaa gadi jirurraa namoonni kudhan akka ajjeefaman odeeffannoon isaan dhaqqabuu himu.
Garuu, ‘caasaan gadi jiru odeeffannoo walitti qabuu irratti hanqina qaba’ jechuun wanta ta’e qixa sirriin mirkaneeffachuuf humni waraanaa akka seenu gaafataniiru.
Akka isaan jedhanitti, gaafa Sambataa Humni Federaalaa gara magaalaa Yaasooti akkasumas Raayyaan Ittisa Biyyaa gara magaalaa Kaamashiitti seeneera.
Obbo Gaaromaan rakkoo teellana mudate furuuf qondaaltota Aanaa Yaasootti bilbilluus bilbila nu jalaa kaasuu dhabani jechuun BBC’tti himaniiru.
Baatii Fulbaanaa keessa qondaaltonni Godina Kaamashii afur yeroo Asoosaadhaa walgahii ooolani galanitti ajjeechaa raawwate hordofee lammileen hedduu ajjeefamaniiru. Kan baqatanis kuma hedduudha.
Yeroo sana irraa eegale gara Godina Wallagga Bahaa Aanaa Haroo Limmuutti lammiileen baqatan dabalaa jiraachuu Obbo Gaaromaa ni dubbatu.
”Fulbaana irraa eegale hanga ammaa nama 52,472’tu nutti baqatee jira. Ammallee buqqaatirra jira namni.”
Yeroo ammaa kaampiiwwan afur keessatti namoonni baqatan kunniin dahoo argatani kan jiran yoo ta’u, kaan mana kireeffatanii, kaan ganda firaa akka jiran warri baqatan himu.
Gara caalu, ummatumti akka isaan gargaaraa jiru himu.
Jiraataan magaalaa Kaamashii maqaan isaanii akka dhahamu hinfeene gama isaaniin ammallee soda keessa akka jiran himuun mootummaan akka dhaqqabuuf gaafataniiru.
Abbaa kana raawwate irratti wanti jiraattonni jedhaniifi qondaaltonni jedhan waldarba. Qondaalli Naannoo Benishaangul Gumuuz ‘hidhattooni ABO Godina Kamaashii jeeqaa jiru’ jechuun himu.
Isaan alattis garuu qaamoleen tarkaanfii Ministirri Muummee fudhataa jiran morman kana raawwatu jechuun dubbatu.
Yaada kana bulchaan Aanaa Haroo Limmuullee waliigalu. ”Warra jijjiiirama kana hinfeenetu Gumuuz keessa gareedhaan kana raawwataa jira” jedhu.
Jiraattonni garuu ”warri yakka kana raawwatan warra biyya bulchaa jiranidha. Isaan kan meeshaa hidhachisuutu jira,” jechuun dubbatu.
Bulchaan Aanaa Haroo Limmuus ta’e jiraataan biraa magaalaa Kaamashii irraa dubbisne waraanni ABO jiraachuu isaa quba akka hinqabne dubbatu.
”ABO dhiisi gaaddisumti qilkleensa isaa hinjiru. ABO fakkaate kan nufixaa jiru hidhataa mootummaati,” jechuun jiraataan magaalaa Kaamashii BBC’ti himaniiru.
Ajjeechaa itti fufe
Gaafa Roobii ajjeechaan raawwachuu isaa dura gaafa Sambataa hojjettonni mootummaa lama miindaa fudhachuuf yeroo adeemaa turanitti ajjeefamuu isaaniifi afur immoo madaa’uu isaanii Obbo Muusaan BBC’tti himaniiru.
Isa boodas gaafa Roobii isa jiraattonni ajjeechaa jumlaa’ jedhanin alatti barattoonni lama mana barnoota irraa galan ajjeefamaniiru.
Isa boodas gaafa Jimaataa ‘namoonni hidhaman haa hiikaman’ jedhuun waldhabdee magaalaa Yaasotti dhalateen namoonni sadii du’uu isaanii Obbo Musaan himu.
Daandiin Kaamashii Finfinnee walqunnamsiisu erga Fulbaana keessa cufame as hin banamne. Jiraattonnis guddaa rakkachaa jiraachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
Sababiin Dhumaatii Daangaa: “Wanti karaa Benishangul Gumuz kana nu jeeqaa jiru iccitii guddaan kunooti. – https://t.co/bv6ZOkzBmy pic.twitter.com/txkF3NTMWH
— Kichuu (@kichuu24) November 26, 2018
Cinaaksan osoo fuula duura iyyinuu shiftoonni ammaas lubbuu nama 20 olii nurraa ajjeesanii jiran maalif